7kw-2000kw Perkins အင်ဂျင် Generator ကို ပေးသွင်း,ထုတ်လုပ်သူ - Fmwpower.com
Perkins မီးစက်တစ်စုံ Perkins ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဖွင့်ထား ပေါင်း Stamford မီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ်နှင့်အတူ FMW brushless မီးစက် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။
ပါဝါစ Range: 2000kw မှ 7kw
Perkins မီးစက် ဖြစ် Perkins အင်ဂျင်တစ်ဦးဘုနျးကွီးနှင့်အတူကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်လုပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်မောင်းနှင် သမိုင်း, ယခုအခါယင်း Perkins အင်ဂျင်ကို ဖြစ် ထို့အပြင်အတူဖက်စပ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်ရုံအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သော မူရင်း Perkins နှမြောရနှင့်နည်းပညာ။ Perkins မီးစက်တစ်စုံ သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်, အလင်းအလေးချိန်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ရှိပါတယ် လောင်စာဆီ-စားသုံးမှု။ ၏အိပ်ဇောထုတ်လွှတ် Perkins ဒီဇယ်မီးစက်တစ်စုံ ဂျာမန် TALUFT စံ, အမေရိကန်က EPA သည် Tier3ရရှိ စံ, အီးယူ-Ⅲstandard။ ၏တနျခိုးအကွာအဝေး Perkins genset ဖြစ် မှ 7kw အထိ 2000kw ။
1. Perkins အင်ဂျင် Generator ကိုပင်မ Specification
Wuxi Perkins Generator ကို
အင်္ဂလန် Perkins Generator ကို
2. Perkins Generator ကို Se t ကို
လွန်ခဲ့သော : 24kw-160kw lovol အင်ဂျင်မီးစက်
နောက်တစ်ခု : 50kw-800kw ရှန်ဟိုင်းအင်ဂျင်မီးစက်
ဘာသာရပ် : 7kw-2000kw Perkins အင်ဂျင် Generator ကို